How'd it happen and more reports?: Narilatha flowers in Himalayas - The flowers in shape ofawoman ခေါ် သူယောင်မယ်အသီး
Narilatha flowers in Himalayas - The flowers in shape ofawoman ခေါ် သူယောင်မယ်အသီး
ဒါဟာ yore ကာလအတွင်နက်ရှိုင်းသောတရားထိုင်လုပ်နေတာရသေ့နှင့် Sage ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုက ဤအမျိုးသမီး၏အသွင်သဏ္ဌာန်ပန်းများများမျက်မှောက်မှာပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြ သည်။
အဆိုပါ Narilatha သို့မဟုတ် Liyathambara ပန်းများ အမျိုးသမီး၏အသွင်သဏ္ဌာန်၌ဖြစ်ဖို့ကို ကမ္ဘာ့ပန်းအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်များနှင့်အရှားပါးဆုံးထဲကတစ်ခုဟုယူဆနေကြသည်ဟုပြောသည်။
အဘယ်သူသည် ဖမ်းမိ သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းသလော?
Ref: ABN Andhrajyothy,
It is believed that in times of yore the concentration of hermits and sages doing deep meditation would be shattered at the sight of these lady-shaped flowers. The Narilatha or Liyathambara flowers said to be in the shape ofawomen are considered one of the most wonderful and rarest of flowers in the world.
But is it really true???? Who captured or made this?
ဤသညျပငျ Himmapan အဘယျမှာရှိအမြိုးသမီးသီးအပှတဈဒဏ်ဍဍာရီသဈတောမှာပေါကျဒါဟာ yore ကာလအတွင်နက်ရှိုင်းသောတရားထိုင်လုပ်နေတာရသေ့နှင့် Sage ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုက ဤအမျိုးသမီးအသွင်သဏ္ဌာန်ပန်းများများမျက်မှောက်မှာပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြ သည်။
ဤသည်ပင် Himmapan အဘယ်မှာရှိအမျိုးသမီးသီးအပွတစ်ဒဏ္ဍဍဍာရီသစ်တောမှာပေါက်နေသည်။ တစ်ဦးကထူးဆန်းပင်လည်းရှိ၏။
'' အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသွင်သဏ္ဌာန်အတွက်အသီးကိုသီး ''
ဒါပေမဲ့များသောအစိမ်းရောင်အသီးကိုသီး၏ပုံသဏ္ဍဍဍာန်အားဖြင့်တအံ့တသြနေစဉ်, အခြားသူများ ရှုပ်ထွေး ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်လျော့နည်းယုံကြည်တယ်ဖြစ်ကြောင်း နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေပင်လည်းရှိ၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာဒဏ္ဍဍဍာရီထဲမှာ, Nariphon အဖြစ်လူသိများသစ်ပင်တပင်ကို နုပျိုအမျိုးသမီးတသတ္တဝါ၏ အသီးကိုသီးခြင်းနှင့် Himaphan လို့ခေါ်တဲ့ဒဏ္ဍဍဍာရီသစ်တောကြီးပွားဖို့ဆိုပါတယ်။ စိတ်ဝိညာဉ်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ကိုသူတို့အအတွင်း၌နေထိုင်ခဲ့ယုံကြည်သည်။
လူငယ်တစ်ဦးအမြိုးသမီး၏အတိအကျကိုအသွင်သဏ္ဌာန်အတွက်အသီးကိုသီးပုံ - ကအင်တာနက်ကို baffling ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဒဏ္ဍဍဍာရီထဲမှာ, Nariphon အဖြစ်လူသိများသစ်ပင်တပင်ကိုနုပျိုအမျိုးသမီးတသတ္တဝါ၏ အသီးကိုသီးခြင်းနှင့် Himaphan လို့ခေါ်တဲ့ဒဏ္ဍဍဍာရီသစ်တောကြီးပွားဖို့ဆိုပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားသခင့ Indra သူ့ဇနီး Vessantara နှင့်သူ၏ကလေးနှစ်ယောက် အဘို့အတော၌နေအိမ်ဝင် ...
ဒဏ္ဍဍဍာရီသစ်တောသတ္တဝါတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်အခြေခံမိန်းကလေးများအပင်၏အသွင်သဏ္ဌာန်အတွက်အသီးအပွသည်းခံခြင်းပင်လည်းရှိ၏။ အဆိုပါစက်ရုံတစ်စမတ်မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ရတဲ့အခါမှ ည့်သော, အရေပြားနှင့်ငယ်ရွယ် gandharvas ကောင်းကင်တမန်ဂီတပညာရှင် copulate ယူ။
MYSTERY Tree That 'Bears Fruit In The Shape Of WOMEN' Found Growing In Thailand
A strange tree growing in Thailand appears to bear fruit in the exact shape ofayoung woman - and it's baffling the internet.
But while many are amazed by the shape of the green fruits, others are less convinced by the confusing footage. Are the trees real or fake?
'' ထိုင်းတွင် ပေါက်ရောက်နေကြာင်းတွေ့ရှိရ သူယောင်မယ်အသီး ''
ထိုင်းကြီးထွားလာတစ်ဦးကထူးဆန်းတဲ့အပင်ကိုလူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီး၏အတိအကျကိုအသွင်သဏ္ဌာန်အတွက်အသီးကိုသီးပုံ - ကအင်တာနက်ကို baffling ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ပင်များကိုမှန်ကန် သို့မဟုတ် အတုဖြစ်ပါသလား?
Posted by Ko Nge at Saturday, December 17, 2016